Xuska Maalinta Shuhadada SNM Oo Lagu Qabtay Magaalada Berbera
Saturday October 17, 2020 - 21:40:54 in Wararka by Editor Caynaba News
Xuska sannad guurada 36 ee ka soo wareegtay maalintii shuhadada SNM ayaa lagu qabtay xarunta gobolka Saaxil ee Berbera.
Sida uu ku soo waramayo wariye Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud oo wakaaladda wararka Somaliland ee solna uga soo warama gobolka Saaxil, waxaana ka qayb galay maamulka gobolka, ka degmada Berbera, xildhibaano, mujaahidiinta Sooyaal ee gobolka Saaxil iyo dadweyne ka socday qaybaha kala duwan ee bulshada.
Ugu horeyn waxa halkaas ka hadlay guddoomiyaha jimciyadda Sooyaal ee gobolka Saaxil Axmed Maxamed Cabdilaahi (Axmed Fariid) iyo xoghayaha jimciyaddaasi Cabdikariin Cismaan Yuusuf, waxayna ka xogwarameen maalintan iyo qiimaha ay ugu fadhido Jamhuuriyadda Somaliland, iyaga oo tilmaamay in 17 oktoobar sannadkii 1984-kii ay ahayd maalintii Burco Duuray isla markaana ayna ku koobnayn maalintaas ee ay u taagan tahay dhamaan xuska shuhadadii ku shihiiday halgankii qadhaadhaa ee ay Ururkii SNM la galeen kaligi taliskii Siyaad Barre.
Sidoo kale, waxa iyana halkaas ka hadlay xoghayaha degmada Berbera Cabdikariin Aadan Cadde iyo xoghayaha gobolka Saaxil Nuux Maxamed Saleebaan, oo xusay in maalintani ka mid tahay halgankii dheeraa ee loo soo maray nabadgalyada Jamhuuriyadda Somaliland.
Gabogabadii waxaa madashaas hadal ka jeediyey duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan (Cabdishakuur Cidin) oo sheegay in halgankii SNM ay ka dhalatay nabadda iyo daganaanshiiyaha ay bulshada Somaliland ku naaloonayaan, isaga oo soo jeediyey in la daryeelo mujaahidiinta iyo agoomihii mujaadiintii shihiiday ka tageen.
Wuxuuna tilmaamay in ay ka wanaagsan tahay xaflad loo qabto in la ogaado xaalada ay ku nool yihiin si loo daboolo baahiyaha ay qabaan iyaga iyo ubadkoodu